Hormuud Foundation oo soo gebagabeysay biyo dhaamin ay u sameysay shacab ku sumoobay xaafada Juungal | Hormuud Telecom Foundation
Home Gurmadka Deg Dega Hormuud Foundation oo soo gebagabeysay biyo dhaamin ay u sameysay shacab ku sumoobay xaafada Juungal
Hormuud Foundation oo soo gebagabeysay biyo dhaamin ay u sameysay shacab ku sumoobay xaafada Juungal	Posted December 23, 2014	by Hormuud Teleocm Foundation
Hey’adda Hormuud Foundation ayaa maanta soo gebagebaysay biyo dhaamin ay muddo sideed cisho ah u sameysay shacabka xaafada Jungal oo ka tirsan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Gudoomiye ku-xigeenka Hey’adda Hormuud Foundation Cumar Salaad Faarax oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in biyo dhaamintaas ay ka faa’iideysteen boqolaal qoys oo ku nool xaafada Jungal kuwaasoo ka badbaaday biyo sumeysan oo dhowaan dadka xaafadaas ku nool ay ka cabeen ceelal biyaha siin jiray.
“Markii biyaha sumeysnaa dadna ku dhinteen qaar kalena xanuuno ay ka qaadeen isbitaalada loo dhigay ayaa heyadda Heyadda Hormuud Foundation waxay bilowday iney booyado biyo ku gaarsiiso dadka xaafada Jugal ku nool ee ka badbaaday dhibkaas ka dib markii ceelashii biyaha siin jiray loo xiray baaritaano ku socday awgeed” ayuu yiri.
Cumar Salaad Faarax ayaa intaas ku daray in biyo dhaaminta oo socotay muddo 8 cisho ah ay maanta soo afjareen ka dib markii la hagaajiyey ayuu yiri ceelashii biyaha siin jiray xaafadaas ayna shaqadoodii dib u bilaabeen maanta.
Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Yaaqshiid oo isna saxaafada la hadlay ayaa uga mahad celiyey shirkada Hormuud biyo dhaamintaas ay u sameysay shacabka xaafada Jungal.
“Hormuud runtii waa shirkada kaliya ee u soo gurmatay dadkii ku xanuunsaday iyo kuwii ka badbaaday dhibaatadii ka dhacday waaxda Jungal waana uga mahad celineynaa talaabadaas wanaagsan” ayuu yiri gudoomiye ku-xigeenka oo tacsi u diray dadkii ku dhintay iyo kuwii ku xanuunsaday biyaha ay cabeen.
Maalmo ka hor ayey aheyd markii Hey’adda Hormuud Foundation ay deeq daawo ah gaarsiisay dadka ku xanuunsaday biyaha sumeysnaa ee ku jira isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho.